Buffon oo raali galin u diray garsooraha dhacdadii garoonka Bernabeu ee kulankii Real Madrid iyo Juventus – Gool FM
Buffon oo raali galin u diray garsooraha dhacdadii garoonka Bernabeu ee kulankii Real Madrid iyo Juventus
Dajiye May 18, 2018
(Juventus) 18 Maajo 2018. Goolhayaha Juventus Gianluigi Buffon ayaa horey u diiday inuu raali galiyo garsoore Michael Oliver ka dib marka uu soo idlaaday kulankii Champions League ay kula ciyaareen Rea; Madrid
Gianluigi Buffon iyo saaxiibadiis ayaa xili ciyaareedkan isaga haray tartanka Champions League, kadib markii labada kulan ay ku wada ciyaareen Real Madrid wareega afar dhamaadka uu ku soo idlaaday 4-3.
Garsoore Michael Oliver ayaa kulankii lugta labaad ee ka dhacay Santiago Bernabeu sameeyay dhacdo muran xoogan dhalisay kadib markii uu go’aansaday daqiiqadii 97-aad in bianconeri uu ku ciqaabo rigoodhe.
Buffon oo markale kasoo muuqday saxaafada ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu raali galin u diray garsoore Michael Oliver wuxuuna yiri: “Waan hubaa in Oliver uu yeelan doono mustaqbal aad u wanaagsan”.
“Aniga ma ihi mid ka careysan Oliver, wax walba halkaas ayay kusoo idlaadeen, laakiin dabcan kuleylka xiligaas qarxay, waxaan u sheegay waxaan gudi ka qabo, waxaan dareemay qiyaano”.
“Waxaa laga yaabaa inaan ka badbadiyey fal celintaydii, waxaa laga yaabaa inay sax ama qald tahay, laakiin ugu dambeyntii waxaan idhi waxa maskaxdayda ka dhex guuxayay”.
RASMI: Tababare Roberto Martinez oo qandaraas cusub u saxiixay xulka qaranka Belgium
Antonio Conte oo kahor finalka FA Cup iska diiday inuu ka tagayo kooxda Chelsea